ရှာလ်လုမ်းခံတပ် တိုက်ပွဲ – မမေ့အပ်သော ချင်းတို့၏ နယ်ချဲ့ခုခံ စစ်သမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခု – Khonumthung Media Group
You are at:Home»Featured»ရှာလ်လုမ်းခံတပ် တိုက်ပွဲ – မမေ့အပ်သော ချင်းတို့၏ နယ်ချဲ့ခုခံ စစ်သမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခု
By Editor on	 May 4, 2020 Featured
ဗြိတိသျှအင်ပါယာ ချင်းတောင်ကိုသိမ်းပိုက်ရန်အတွက် ကြိုးပမ်းစဉ် ချင်းလူမျိုးများနှင့် တိုက်ပွဲမြောက်များစွာ တိုက်ခဲ့ရသည်။ ထိုတိုက်ပွဲတွေထဲမှ စီးယင်းနယ် ယနေ့ Voklak ရွာနားတွင် ဖြစ်ပွားသော Taitan/ ရှာလ်လုမ်းတိုက်ပွဲသည် အပြင်းထန်ဆုံးတိုက်ပွဲဖြစ်သည်။ ထိုတိုက်ပွဲတွင် စီးယင်းချင်းမှ သူရဲကောင်းစစ်သည် (၂၇) ဦးတို့သည် သူတို့၏ ဘိုးဘွားစဉ်ဆက်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည့် မြေကိုကာကွယ်ရင်း တိုက်ပွဲဝင်ရာတွင် အသက်ပေးလှူခဲ့ရသည်။ ဗြိတိသျှစစ်တပ်မှလည်း အရာရှိတစ်ဦးနှင့် စစ်သား (၃) ဦး ကျရှုံးခဲ့ရသည်။ နောက်ပြီး ဗြိတိသျှအရာရှိ Surgeon. Captain Ferdinand Le Quesne သည် ကမ္ဘာ့စစ်ဘက်သူရသတ္တိဆိုင်ရာ စွမ်းရည်ဘွဲ့တံဆိပ်များတွင် အမြင့်မားဆုံးဖြစ်သော Victoria Cross တံဆိပ်ဖြင့် ဂုဏ်ပြုခြင်းခံရသည်။ ဒီနေ့ မေလ (၄) ရက်နေ့ဆိုရင် ဒီသမိုင်းဝင် ရှာလ်လုမ်းတိုက်ပွဲကြီးဟာ (၁၃၁) နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်သည်နှင့်အမျှ ဤတိုက်ပွဲအကြောင်းကို ဖော်ပြသွားမည်ဖြစ်သည်။
၁၈၈၅ ခုနှစ်မှာ ဗြိတိသျှအင်ပါယာဟာ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးကို သိမ်းပိုက်ပြီးနောက်မှာ ချင်းလူမျိုးတွေနဲ့ ဆက်သွယ်မှုရှိလာခဲ့သည်။ ဖလမ်းကောင်စီခေါင်းဆောင် Pu Con Bik (ဗိုလ်စွန်ပက်) ချင်းတွင်းနိုင်ငံရေးအရာရှိ Captain F.D. Raikes တို့သည် ၁၈၈၇ ခုနှစ်၊ မတ်လနဲ့ ၁၈၈၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတို့မှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ နောက်ပြီး Capt. Raikes သည် စီးယင်းကိုယ်စားလှယ် (၅) ဦးတို့နှင့် ကလေးမြို့ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ၁၈၈၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၆) ရက်နေ့မှာ တွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်။ ကမ်ဟောင် (Kamhau) ကိုယ်စားလှယ် Lun Sat နှင့် အထက်ချင်းတွင်း ခရိုင်ဝန်တို့သည်လည်း မတ်လ (၈) ရက်နေ့တွင် တွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်။ နောက်ပြီး ဟားခါး၊ ဇိုခွါနှင့် ဆက်သာ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်လည်း တွေ့ဆုံမှုများရှိခဲ့သည်။
ဒီတွေ့ဆုံမှုတွေမှာ ဗြိတိသျှပိုင် ဗမာပြည်ဘက်ကို ချင်းမျိုးနွယ်စုများ လာမတိုက်ဖို့နဲ့ အိန္ဒိယနဲ့ ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းဖောက်ဖို့ စသည်တို့ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ သို့သော်လည်း ချင်းလူမျိုးတို့သည် ဗြိတိသျှတို့အပေါ် သံသယရှိလာပြီး တစ်နေ့တစ်ခြား ဗြိတိသျှတွေနှင့် ဆက်ဆံရေးပျက်ပြားခဲ့ရသည်။ ၁၈၈၈ ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် တာရွန်းစစ်သည်အင်အား (၅၀၀) ကျော်မှ အင်းဒင်း (ယခုအန်းတဲန်) ကို သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြပြီး စစ်သည် (၃၀၀) သည် ကလေးဝ၊ နောက် (၃၀၀) သည် တောင်တွင်းချိုင့်ဝှမ်းများအား တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်။ စီးယင်းစစ်သည် (၅၀၀) သည် ကလေးမြို့နှင့် နောက်ထပ် (၆၀၀) သည် ကူဘူ (Kubu) ချိုင့်ဝှမ်းအား တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်။ ဗြိတိသျှစစ်တပ်သည်လည်း စခန်းများအား အင်အားဖြည့်ပြီး ချင်းတပ်ပေါင်းစုတို့အား တွန်းလှန်နိုင်ခဲ့ကြသည်။
တာရွှန်းတို့သည် ဗြိတိသျှကိုတော်လှန်တဲ့ ရွှေဂျိုးဖြူမင်းသားနဲ့နောက်လိုက်တွေကို ခိုလှုံခွင့်ပေးခဲ့ပြီး ရွှေဂျိုးဖြူမင်းသား၊ စော်ဘွားဟောင်းများ၊ စီးယင်း၊ စုတ်သဲ၊ ကမ်ဟောင်တို့နှင့်အတူ မြေပြန့်ရှိ ဗြိတိသျှစစ်စခန်းများအား ၁၈၈၈ ခုနှစ်၊ တစ်နှစ်လုံးလုံး သွားရောက်တိုက်ခိုက်လေ့ရှိသည်။ ဒါကြောင့် ဗြိတိသျှတို့က တာရွှန်းတို့ကို ရွှေဂျိုးဖြူမင်းသားအဖွဲ့အား လက်လွှတ်ရန်၊ မလွှတ်ပါက ချင်းတောင်အား စစ်တပ်ဖြင့် ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ၁၈၈၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လတွင် ရာဇသံပေးခဲ့သည်။ ၎င်းနည်းတူ စီးယင်းတို့ထံတွင်လည်း ဖမ်းထားသူတွေကို လွှတ်ဖို့ ရာဇသံပေးခဲ့သည်။ တာရွှန်းနဲ့ စီးယင်းတို့ဟာ ဗြိတိသျှတို့ရဲ့ ရာဇသံကို ဂရုမစိုက်တဲ့အတွက် ဗြိတိသျှတို့ဟာ ၁၈၈၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလမှာ စီးယင်းနယ်ကိုသိမ်းပိုက်ဖို့ စတင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ စီးယင်းနယ်ဘက်ကို လမ်းဖောက်ရင်းနဲ့ စစ်ရေးပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဗြိတိသျှတို့ စီးယင်းနယ်ကိုသိမ်းပိုက်ဖို့ ရှေ့တိုးလုပ်ဆောင်နေစဉ်မှာ ရွှေဂျိုးဖြူ၊ ရှမ်းစော်ဘွား၊ တာရွှန်းတို့နဲ့ စီးယင်း၊ စုသဲ၊ ကမ်ဟောက်တို့ဟာ စည်းလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ မြေပြန့်က ဗြိတိသျှစခန်းတွေကို ၁၈၈၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုအကြောင်းကို နိုင်ငံရေးအရာရှိ Mr. Carey က “စီးယင်းနယ်ကို သိမ်းပိုက်ဖို့ ကြိုးစားနေစဉ်မှာ ချင်းလူမျိုးတွေဟာ ကျနော်တို့နောက်ကြောက စခန်းတွေကို သွားရောက်တိုက်ခိုက်နိုင်တာကိုကြည့်ရင် တိုက်ခိုက်ရေးကျွမ်းကျင်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာ ပေါ်လွင်တယ်” ဆိုပြီး မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။
လက်နက်အင်အား အစစအရာရာသာလွန်တဲ့ ဗြိတိသျှတို့ဟာ စီးယင်းနယ်ကို တဖြည်းဖြည်းသိမ်းပိုက်ပြီး ၁၈၈၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှာ စီးယင်းနယ်အားလုံးကို သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဗြိတိသျှတို့ ချင်းပြည်ကိုသိမ်းပိုက်ဖို့ ကြိုးပမ်းစဉ်မှာ ချင်းလူမျိုးတွေဟာ မျိုးနွယ်စုတခုနဲ့တခုအကြားက ပြဿနာတွေကို ဘေးဖယ်ပြီး စီးယင်း၊ ကမ်ဟောက်နဲ့ စုတ်သဲတို့ဟာ ညီညွတ်ရဲဝံ့စွာနဲ့ ဗြိတိသျှတို့ကို ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဗြိတိသျှ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Gen. George White က… “ကျနော်တိုက်ခဲ့ဖူးတဲ့ စစ်ပွဲတွေထဲမှာ အခက်အခဲဆုံးတိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်တယ်လို့” မှတ်ချင်ချခဲ့သည်။ ဗြိတိသျှတို့ စီးယင်းနယ်ကို သိမ်းပိုက်ပြီးနောက် ထုတ်လိုင်ရွာမှာ Gen. White အား ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် Fort White စစ်စခန်းကို တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။ ဗြိတိသျှတို့ စီးယင်းနယ်ကို သိမ်းပိုက်ခဲ့သော်လည်း ဗိုလ်ခိုင်ကမ်းခေါင်းဆောင်သော စီးယင်းတို့ဟာ အရှုံးမပေးဘဲ သူတို့ရွာတွေကို မီးရှို့ပြီး၊ တောပုန်းပြီး ဆက်လက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။
၁၈၈၉ ခုနှစ်၊ မေလမှာ စီးယင်းနယ်၊ Taitan အရပ်တွင် တဲအိမ်သစ်များအား ဗြိတိသျှတို့ လှမ်းမြင်ရသည်။ Buanman ရွာသားတွေဟာ ဗြိတိသျှတို့ လာရောက်တိုက်မယ်ဆိုတာ သိတဲ့အတွက် Taitan ရွာအောက်မှာ Siallum ဆိုတဲ့ ခံတပ်ကို ဆောက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Sial ဆိုတာက နွားနောက်ဦးခေါင်းဖြစ်ပြီး၊ Lum ကတော့ ခံတပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ကတုတ်ကျင်း (၃) ခု ဆောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကတုတ်ကျင်းတစ်ခုရဲ့နာမည်က Kulhpi ဖြစ်ပြီး Taitan ရွာနဲ့ အနီးဆုံးမှာ ရှိပါတယ်။ Kulhpi နဲ့ (၁၈ဝ) ပေလောက်အကွာမှာ (၆) ပေကနေ (၉) ပေကျယ်တဲ့ ကတုတ်ကျင်းကို ဆောက်လုပ်ကြတယ်။ အဲဒီကတုတ်ကျင်းနှစ်ခုဟာ Kulh Baan ခေါ် (၃) ပေအနက်နဲ့အကျယ် လမ်းကြောင်းတခုနဲ့ ဆက်သွယ် ဖောက်လုပ်ထားပါတယ်။ Kulhpi နှင့် Kulh Baan တွေကို သစ်သားတွေသစ်ရွက်တွေနဲ့ ဖုံးထားပါတယ်။ ခံတပ်တွေအနားမှာလည်း (၃) ပေအမြင့်ရှိတဲ့ ဆူးချွန်တွေ စိုက်ထူထားပါတယ်။ နောက် အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေ ပုန်းဖို့နေရာ၊ သူကြီးတွေ ပုန်းဖို့နေရာနဲ့ နတ်ဆရာတွေ ပုန်းဖို့နေရာတွေကိုလည်း ဆောက်လုပ်ထားပါတယ်။ ရန်သူတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကို စောင့်ကြည့်ဖို့ ကင်းစောင့်မျှော်စင်ကိုလည်း Mualsan တောင်မှာ ဆောက်လုပ်ထားကြပါတယ်။
ဗြိတိသျှစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Faunce က Taitan ကို တိုက်ဖို့အတွက် 42nd Gurkha Light Infantry Division
ကနေ ရိုင်ဖယ်ကိုင်စစ်သား (၆၅) ယောက်နဲ့ 2nd Norfolk Battalion ကနေ ရိုင်ဖယ်ကိုင် စစ်သား အယောက် (၆ဝ) စေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုစစ်ကြောင်းကို 2nd Norfolk Battalion က Maj. Shepherd နဲ့ 42nd Gurkha တပ်ကို Captain Westmoreland တို့က ဦးဆောင်ပါတယ်။ ဗြိတိသျှစစ်တပ်ဟာ ၁၈၈၉ ခုနှစ်၊ မေလ (၄) ရက်နေ့မှာ ဖို့ဝှိုက်ကနေ Buanman, Mualsan, Ngumpi, Nalun, Taikhe အရပ်တွေကို ဖြတ်ကျော်ပြီး Taitan ဘက်ကိုဦးတည်လာခဲ့ကြပါတယ်။ ဗြိတိသျှတို့ ချီတက်လာတာကို ပထမဆုံးသိတာကတော့ စီးယင်းတို့မွေးထားတဲ့ ခွေးဟောင်သံတွေကနေ သတိထားမိကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Mualsan ကနေ ကင်းစောင့်နေတဲ့ Pu Zong On က ဗြိတိသျှတို့ ချီတက်လာတာတွေ့တာနဲ့ ရွာကိုပြေးပြီးပြောပါတယ်။ အဲဒီနောက် ကလေးသူငယ် (၈ဝ)၊ အမျိုးသမီးတွေ၊ ရွာသူကြီးတွေဟာ ပုန်းအောင်းရမယ့် နေရာတွေဆီကို သွားကြပါတယ်။ စီးယင်းစစ်သားတွေကလည်း ကတုတ်ကျင်းတွေမှာ နေရာယူကြပါတယ်။ ဗြိတိသျှတို့ Taitan ရောက်တဲ့အချိန်မှာ တရွာလုံး တိတ်ဆိတ်နေပါတယ်။ Taitan ကနေ Siallum ဘက်ကို ဆက်လက် ထွက်ခွာလာခဲ့ကြပါတယ်။ စီးယင်းတွေကလည်း ချင်းတူမီးသေနတ်နဲ့ အသင့်စောင့်ကြိုခဲ့ကြပါတယ်။
ဗြိတိသျှစစ်တပ်တွေဟာ ကတုတ်ကျင်းနဲ့ ပေ (၁၅ဝ) လောက်အကွာကို ရောက်တာနဲ့ စီးယင်းတွေက ကတုတ်ကျင်းတွေထဲကနေ ဒရစပ် ပစ်ခတ်ကြပါတယ်။ ဗြိတိသျှတို့ဟာ ဘယ်ကနေ ပစ်တယ်ဆိုတာ ချက်ခြင်းမသိတဲ့အတွက် တုန်လှုပ်မှင်သက်သွားကြပါတယ်။ Second. Lt. Michell ကလည်း ကျည်သင့်ပြီး ပစ်လဲပါတယ်။ ဗြိတိသျှတို့ကလည်း သေနတ်ငွေ့ထွက်နေတဲ့ ကတုတ်ကျင်း (၁) ကို ပြန်ပစ်ကြပါတယ်။ ဆေးဆရာဝန် ဗိုလ်ကြီး Le Quesne လည်း Lt.Michell ရဲ့ဒဏ်ရာကို ကြည့်ပေးရင်း စီးယင်းတွေဘက်ကို ပြန်ပြန်ပစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်ရင်း မကြာခင်မှာ ဗြိတိသျှစစ်သားတွေဟာ ကတုတ်ကျင်း (၁) အပေါ်ကို ရောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကတုတ်ကျင်းအဖုံးကိုဖွင့်ပြီး အထဲက စီးယင်းစစ်သားတွေကို ပစ်ခတ်တာကြောင့် စီးယင်းစစ်သားတွေ ကျဆုံးခဲ့ကြပါတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ ကတုတ်ကျင်း (၂) က စီးယင်းစစ်သားတွေဟာ ဗြိတိသျှတို့ ရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်ဖို့နဲ့ မလှုပ်နိုင်အောင် ပစ်ခတ်နေခဲ့ပါတယ်။ ကတုတ်ကျင်း (၂) ဘေးက ခြုံထဲကနေလည်း စီးယင်းတွေက ပစ်ခတ်နေတာကြောင့် ဗြိတိသျှတို့ ဆုတ်ခွာခဲ့ကြရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စီးယင်းတို့က လိုက်လံမပစ်ခတ်ခဲ့ကြပါဘူး။ ဗြိတိသျှတို့ဟာ ဆုတ်ခွာရင်း Taitan ရွာကို မီးရှို့ခဲ့ကြပါတယ်။ ဗြိတိသျှဘက်က အရာရှိတယောက်နဲ့ စစ်သားသုံးယောက် ကျခဲ့ပြီး ဗိုလ်ကြီး Mayne၊ ဗိုလ်ကြီး LeQuesne နဲ့ စစ်သား (၈) ယောက် အပြင်းအထန် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြပါတယ်။
အဲဒီလို ဆုတ်ခွာရတဲ့အကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Faunce က စစ်ကော်မရှင်နာချုပ်ဆီကို အခုလို အစီရင်ခံခဲ့ပါတယ်။ “42nd Gurkha တပ်ကနေ စစ်သား (၆၅) ယောက်နဲ့၊ Norfolk ကနေ (၆ဝ) ကို ဗိုလ်မှူး Shepherd ကို ဦးဆောင်ခဲ့ပြီး Taitanကို သွားတိုက်ရန်အမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ သူတို့အသစ်တည်တဲ့ရွာ ရောက်တဲ့အထိ ဘာမှ ပြသနာမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီရွာအောက်မှာတော့ ကတုတ်ကျင်းကောင်းကောင်း (၂) ခု ရှိပါတယ်။ အဲဒီ ကတုတ်ကျင်းတွေက တခုနဲ့တခု ဆက်သွယ်နိုင်ပြီး၊ သစ်သားတွေသစ်ရွက်တွေနဲ့ ဖုံးထားပါတယ်။ စီးယင်းချင်းစစ်သားတွေဟာ ကတုတ်ကျင်းနဲ့ ကိုက် (၅ဝ) အကွာလောက် ကျနော်တို့ရောက်တဲ့အချိန်မှာ စပစ်ပါတယ်။ သူတို့ကတုတ်ကျင်းထဲကနေ လုံးဝနောက်မဆုတ်ပဲ ပစ်ခတ်ကြပါတယ်။ ကတုတ်ကျင်း (၁) မှာ Bayonet (ရိုင်ဖယ်လ်သေနတ်ရှေ့တွင် တပ်ဆင်ထားသောဓါးငယ်) နဲ့ (၈) ယောက်ကို ကျနော်တို့သတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ကတုတ်ကျင်းတစ်ကနေ သူတို့လူ (၃ဝ) လောက်ကို သတ်နိုင်ခဲ့ပြီး အများအပြား ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ကျနော်တို့ဘက်က သေဆုံးသူတွေ ဒဏ်ရာရသူတွေအတွက် ကျနော် အရမ်းဝမ်းနည်းပါတယ်။ ရွာသစ်ဆောက်တာကို ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကြပေမယ့် ကတုတ်ကျင်းကိုတော့ အဲဒီနေ့မှာ မသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ တိုက်ပွဲခေါင်းဆောင်က ကျဆုံးသူ၊ ဒဏ်ရာရသူတွေ များနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ထပ်ခံရမယ်ဆိုရင် အဲဒီည ဖို့ဝှိုက်ကို ပြန်မရောက်နိုင်တော့ဘူး။ နောက်ပြီး ညနေစောင်းပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ညအိပ်ဖို့နဲ့၊ အစားအစာလည်း မပါလာတဲ့အတွက် ပြန်ဆုတ်ခဲ့ပါတယ်”… ဆိုပြီး မေလ (၁၅) ရက်မှာ အစီရင်ခံစာ ရေးခဲ့ပါတယ်။
ဗြိတိသျှတို့ ဆုတ်ခွာပြီးနောက် စီးယင်းချင်းတွေဟာလည်း ကတုတ်ကျင်း (၂) နဲ့ (၃) ကို ပြင်ဆင်ပြီး ဗြိတိသျှတို့ကို အသင့် စောင့်နေကြပါတယ်။ ဗြိတိသျှဗိုလ်ချုပ်ကြီး Faunce ကို မေလ (၆) ရက်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Symonds နဲ့ အစားထိုးပြီးနောက် သူကိုယ်တိုင် စစ်သား (၁၅ဝ) နဲ့ မေလ (၁ဝ) ရက်နေ့မှာ Siallum ကိုချီတက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ မေလ (၄) ရက်နေ့တိုက်ပွဲရဲ့ကတုတ်ကျင်းတွေကို သွားကြည့်ရာမှာ စီးယင်းစစ်သားအလောင်းတွေကိုလည်း တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ကတုတ်ကျင်းတွေကိုတော့ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ မေ (၄) ရက်တိုက်ပွဲမှာ စီးယင်းစစ်သား (၂၇) ဦး ကျဆုံးခဲ့ကြပါတယ်။ ရှာလ်လုမ်းတိုက်ပွဲတွင် ကျဆုံးသွားသော စီးယင်းချင်းစစ်သည် (၂၇) ဦးတို့၏အမည်များမှာ –
1. Pu Khup Vum, 2. Pi Vung Neam, 3. Pi Ot Huai, 4. Pu Khai Suak, 5. Pu Lian Kam, 6. Pu Vum Mang, 7.Pu Tuang Vungh, 8. Pi Huai Nuam, 9. Pu Pau Suang, 10. Pi Lian Vung, 11. Pu Zong On, 12. Pu Pau Suang, 13. Pi Lian Vung, 14. Pu Zong On, 15. Pu Zong Thuam, 16. Pu Za Vum, 17. Pi Lam Ciang, 18. Pu Thang Hau, 19. Pi Uap Nuam, 20. Pu Lu Kam, 21. Pi Niang Ciang, 22. Pu Son Suang, 23. Pu En Kham, 24. Pi Dim Ngiak, 25. Pu Pau Lam, 26. Hang Sing နှင့် 27. Pi Uap Huai တို့ဖြစ်ကြသည်။
Buanman သူကြီး Lian Kham၊ Tartan သူကြီး Do Lian ရဲ့ ညီနှစ်ယောက်လည်း ကျဆုံးခဲ့ကြပါတယ်။ Taitan သူကြီး Do Lian လည်း မြင်းခြံထောင်မှာ ထောင် (၅) နှစ်ကျခဲ့ပါတယ်။
ဒီတိုက်ပွဲမှာ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ Capt. Le Quesne ကို သူ့ရဲ့ရဲရင့်မှုနဲ့ စစ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုကြောင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အမြင့်ဆုံးဂုဏ်ပြုမှုဖြစ်တဲ့ Victoria Cross ဆုကို ချီးမြှင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီတံဆိပ်ကို ဒီနေ့ထက်တိုင် ဗြိတိသျှနိုင်ငံ Jersey ပြတိုက်မှာ တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။
Capt. LeQuesne ရဲ့ Victoria Cross ဆုရတာကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ရှားလ်လုမ်းတိုက်ပွဲပြင်းထန်ပုံကို သိနိုင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးကို အုပ်စိုးခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့အင်အားအကြီးဆုံးစစ်တပ်က ကျနော်တို့ဘိုးဘွားတွေကို လွယ်လင့်တကူ မနိုင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ကျနော်တို့ချင်းပြည်ကြီးကို လာရောက်တိုက်ခိုက်သူတွေ ဘယ်လိုပင် အင်အားကြီးလင့်ကစား ရဲဝံ့စွာနဲ့ ပြန်လည်တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့ ကျနော်တို့ဘိုးဘွားတွေရဲ့ ရဲစွမ်းသတ္တိကို ဂုဏ်ပြုရမှာဖြစ်သလို၊ အစဉ် လေးစားဂုဏ်ယူရမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ရှားလ်လုမ်းတိုက်ခိုက်မှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ Pu Pau Thual ကလည်း ရှာလ်လုမ်းတိုက်ပွဲနှင့် တိုက်ပွဲတွင်ကျဆုံးသွားသော စစ်သူရဲကောင်းများအား ဂုဏ်ပြုရင်း အောက်ပါ ရှေးရိုးစဉ်လာသီချင်းတစ်ပုဒ် စပ်ဆိုခဲ့သည်။
Phung Sak Luang leh leido sakluang
Tul Luang thing bang hong ki phom
Phung luang lumsuang bang beal ing
Pu von min nam sial ing
(ကျဆုံးသွားတဲ့ သူရဲကောင်းအမျိုးတွေရဲ့ နာမည်ကို ခွန်အားယူရေရွတ်ရင်း ငါ… ရန်သူတွေကို ချေမှုန်းခဲ့တယ်)
The Chin Hills by B.S Carey and H.N Tuck published in 1896.
File Number Acc. 2712. National Archive Department, Yangon
A profile of Burma Frontier Man by Vum Kho Hau.
The Siallum Fort published by On Lian Khai (Voklak)
All photos are from Globalsiyinnews.blogspot.com
ဗွိတိသြှအငျပါယာ ခငျြးတောငျကိုသိမျးပိုကျရနျအတှကျ ကွိုးပမျးစဉျ ခငျြးလူမြိုးမြားနှငျ့ တိုကျပှဲမွောကျမြားစှာ တိုကျခဲ့ရသညျ။ ထိုတိုကျပှဲတှထေဲမှ စီးယငျးနယျ ယနေ့ Voklak ရှာနားတှငျ ဖွဈပှားသော Taitan/ ရှာလျလုမျးတိုကျပှဲသညျ အပွငျးထနျဆုံးတိုကျပှဲဖွဈသညျ။ ထိုတိုကျပှဲတှငျ စီးယငျးခငျြးမှ သူရဲကောငျးစဈသညျ (၂၇) ဦးတို့သညျ သူတို့၏ ဘိုးဘှားစဉျဆကျပိုငျဆိုငျခဲ့သညျ့ မွကေိုကာကှယျရငျး တိုကျပှဲဝငျရာတှငျ အသကျပေးလှူခဲ့ရသညျ။ ဗွိတိသြှစဈတပျမှလညျး အရာရှိတဈဦးနှငျ့ စဈသား (၃) ဦး ကရြှုံးခဲ့ရသညျ။ နောကျပွီး ဗွိတိသြှအရာရှိ Surgeon. Captain Ferdinand Le Quesne သညျ ကမ်ဘာ့စဈဘကျသူရသတ်တိဆိုငျရာ စှမျးရညျဘှဲ့တံဆိပျမြားတှငျ အမွငျ့မားဆုံးဖွဈသော Victoria Cross တံဆိပျဖွငျ့ ဂုဏျပွုခွငျးခံရသညျ။ ဒီနေ့ မလေ (၄) ရကျနဆေို့ရငျ ဒီသမိုငျးဝငျ ရှာလျလုမျးတိုကျပှဲကွီးဟာ (၁၃၁) နှဈပွညျ့ပွီဖွဈသညျနှငျ့အမြှ ဤတိုကျပှဲအကွောငျးကို ဖျောပွသှားမညျဖွဈသညျ။
၁၈၈၅ ခုနှဈမှာ ဗွိတိသြှအငျပါယာဟာ မွနျမာတဈနိုငျငံလုံးကို သိမျးပိုကျပွီးနောကျမှာ ခငျြးလူမြိုးတှနေဲ့ ဆကျသှယျမှုရှိလာခဲ့သညျ။ ဖလမျးကောငျစီခေါငျးဆောငျ Pu Con Bik (ဗိုလျစှနျပကျ) ခငျြးတှငျးနိုငျငံရေးအရာရှိ Captain F.D. Raikes တို့သညျ ၁၈၈၇ ခုနှဈ၊ မတျလနဲ့ ၁၈၈၈ ခုနှဈ၊ ဇနျနဝါရီလတို့မှာ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးမှုမြား ပွုလုပျခဲ့ကွသညျ။ နောကျပွီး Capt. Raikes သညျ စီးယငျးကိုယျစားလှယျ (၅) ဦးတို့နှငျ့ ကလေးမွို့ဘုနျးကွီးကြောငျးတှငျ ၁၈၈၇ ခုနှဈ၊ ဒီဇငျဘာလ (၂၆) ရကျနမှေ့ာ တှဆေုံ့ခဲ့ကွသညျ။ ကမျဟောငျ (Kamhau) ကိုယျစားလှယျ Lun Sat နှငျ့ အထကျခငျြးတှငျး ခရိုငျဝနျတို့သညျလညျး မတျလ (၈) ရကျနတှေ့ငျ တှဆေုံ့ခဲ့ကွသညျ။ နောကျပွီး ဟားခါး၊ ဇိုခှါနှငျ့ ဆကျသာ ကိုယျစားလှယျမြားနှငျ့လညျး တှဆေုံ့မှုမြားရှိခဲ့သညျ။
ဒီတှဆေုံ့မှုတှမှော ဗွိတိသြှပိုငျ ဗမာပွညျဘကျကို ခငျြးမြိုးနှယျစုမြား လာမတိုကျဖို့နဲ့ အိန်ဒိယနဲ့ ကုနျသှယျရေးလမျးကွောငျးဖောကျဖို့ စသညျတို့ ဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။ သို့သျောလညျး ခငျြးလူမြိုးတို့သညျ ဗွိတိသြှတို့အပျေါ သံသယရှိလာပွီး တဈနတေ့ဈခွား ဗွိတိသြှတှနှေငျ့ ဆကျဆံရေးပကျြပွားခဲ့ရသညျ။ ၁၈၈၈ ခုနှဈ၊ မတျလတှငျ တာရှနျးစဈသညျအငျအား (၅၀ဝ) ကြျောမှ အငျးဒငျး (ယခုအနျးတဲနျ) ကို သိမျးပိုကျခဲ့ကွပွီး စဈသညျ (၃၀ဝ) သညျ ကလေးဝ၊ နောကျ (၃၀ဝ) သညျ တောငျတှငျးခြိုငျ့ဝှမျးမြားအား တိုကျခိုကျခဲ့ကွသညျ။ စီးယငျးစဈသညျ (၅၀ဝ) သညျ ကလေးမွို့နှငျ့ နောကျထပျ (၆၀ဝ) သညျ ကူဘူ (Kubu) ခြိုငျ့ဝှမျးအား တိုကျခိုကျခဲ့ကွသညျ။ ဗွိတိသြှစဈတပျသညျလညျး စခနျးမြားအား အငျအားဖွညျ့ပွီး ခငျြးတပျပေါငျးစုတို့အား တှနျးလှနျနိုငျခဲ့ကွသညျ။
တာရှနျးတို့သညျ ဗွိတိသြှကိုတျောလှနျတဲ့ ရှဂြေိုးဖွူမငျးသားနဲ့နောကျလိုကျတှကေို ခိုလှုံခှငျ့ပေးခဲ့ပွီး ရှဂြေိုးဖွူမငျးသား၊ စျောဘှားဟောငျးမြား၊ စီးယငျး၊ စုတျသဲ၊ ကမျဟောငျတို့နှငျ့အတူ မွပွေနျ့ရှိ ဗွိတိသြှစဈစခနျးမြားအား ၁၈၈၈ ခုနှဈ၊ တဈနှဈလုံးလုံး သှားရောကျတိုကျခိုကျလရှေိ့သညျ။ ဒါကွောငျ့ ဗွိတိသြှတို့က တာရှနျးတို့ကို ရှဂြေိုးဖွူမငျးသားအဖှဲ့အား လကျလှတျရနျ၊ မလှတျပါက ခငျြးတောငျအား စဈတပျဖွငျ့ ဝငျရောကျတိုကျခိုကျမညျဖွဈကွောငျး ၁၈၈၈ ခုနှဈ၊ သွဂုတျလတှငျ ရာဇသံပေးခဲ့သညျ။ ၎င်းငျးနညျးတူ စီးယငျးတို့ထံတှငျလညျး ဖမျးထားသူတှကေို လှတျဖို့ ရာဇသံပေးခဲ့သညျ။ တာရှနျးနဲ့ စီးယငျးတို့ဟာ ဗွိတိသြှတို့ရဲ့ ရာဇသံကို ဂရုမစိုကျတဲ့အတှကျ ဗွိတိသြှတို့ဟာ ၁၈၈၈ ခုနှဈ၊ ဒီဇငျဘာလမှာ စီးယငျးနယျကိုသိမျးပိုကျဖို့ စတငျပွငျဆငျခဲ့ပါတယျ။ စီးယငျးနယျဘကျကို လမျးဖောကျရငျးနဲ့ စဈရေးပွငျဆငျမှုတှေ လုပျဆောငျခဲ့ကွပါတယျ။
ဗွိတိသြှတို့ စီးယငျးနယျကိုသိမျးပိုကျဖို့ ရှတေို့းလုပျဆောငျနစေဉျမှာ ရှဂြေိုးဖွူ၊ ရှမျးစျောဘှား၊ တာရှနျးတို့နဲ့ စီးယငျး၊ စုသဲ၊ ကမျဟောကျတို့ဟာ စညျးလုံးညီညှတျစှာနဲ့ မွပွေနျ့က ဗွိတိသြှစခနျးတှကေို ၁၈၈၈ ခုနှဈ၊ ဒီဇငျဘာလတှငျ တိုကျခိုကျခဲ့ကွပါသညျ။ ထိုအကွောငျးကို နိုငျငံရေးအရာရှိ Mr. Carey က “စီးယငျးနယျကို သိမျးပိုကျဖို့ ကွိုးစားနစေဉျမှာ ခငျြးလူမြိုးတှဟော ကနြျောတို့နောကျကွောက စခနျးတှကေို သှားရောကျတိုကျခိုကျနိုငျတာကိုကွညျ့ရငျ တိုကျခိုကျရေးကြှမျးကငျြသူတှဖွေဈတယျဆိုတာ ပျေါလှငျတယျ” ဆိုပွီး မှတျတမျးတငျခဲ့သညျ။
လကျနကျအငျအား အစစအရာရာသာလှနျတဲ့ ဗွိတိသြှတို့ဟာ စီးယငျးနယျကို တဖွညျးဖွညျးသိမျးပိုကျပွီး ၁၈၈၉ ခုနှဈ၊ ဧပွီလမှာ စီးယငျးနယျအားလုံးကို သိမျးယူနိုငျခဲ့ကွပါတယျ။ ဗွိတိသြှတို့ ခငျြးပွညျကိုသိမျးပိုကျဖို့ ကွိုးပမျးစဉျမှာ ခငျြးလူမြိုးတှဟော မြိုးနှယျစုတခုနဲ့တခုအကွားက ပွဿနာတှကေို ဘေးဖယျပွီး စီးယငျး၊ ကမျဟောကျနဲ့ စုတျသဲတို့ဟာ ညီညှတျရဲဝံ့စှာနဲ့ ဗွိတိသြှတို့ကို ဆနျ့ကငျြခဲ့ကွပါတယျ။ ဗွိတိသြှ ဗိုလျခြုပျကွီး Gen. George White က… “ကနြျောတိုကျခဲ့ဖူးတဲ့ စဈပှဲတှထေဲမှာ အခကျအခဲဆုံးတိုကျပှဲတှေ ဖွဈတယျလို့” မှတျခငျြခခြဲ့သညျ။ ဗွိတိသြှတို့ စီးယငျးနယျကို သိမျးပိုကျပွီးနောကျ ထုတျလိုငျရှာမှာ Gen. White အား ဂုဏျပွုသောအားဖွငျ့ Fort White စဈစခနျးကို တညျဆောကျခဲ့ကွသညျ။ ဗွိတိသြှတို့ စီးယငျးနယျကို သိမျးပိုကျခဲ့သျောလညျး ဗိုလျခိုငျကမျးခေါငျးဆောငျသော စီးယငျးတို့ဟာ အရှုံးမပေးဘဲ သူတို့ရှာတှကေို မီးရှို့ပွီး၊ တောပုနျးပွီး ဆကျလကျတိုကျခိုကျခဲ့ကွပါတယျ။
၁၈၈၉ ခုနှဈ၊ မလေမှာ စီးယငျးနယျ၊ Taitan အရပျတှငျ တဲအိမျသဈမြားအား ဗွိတိသြှတို့ လှမျးမွငျရသညျ။ Buanman ရှာသားတှဟော ဗွိတိသြှတို့ လာရောကျတိုကျမယျဆိုတာ သိတဲ့အတှကျ Taitan ရှာအောကျမှာ Siallum ဆိုတဲ့ ခံတပျကို ဆောကျလုပျကွတာဖွဈပါတယျ။ Sial ဆိုတာက နှားနောကျဦးခေါငျးဖွဈပွီး၊ Lum ကတော့ ခံတပျဖွဈပါတယျ။ အဲဒီမှာ ကတုတျကငျြး (၃) ခု ဆောကျခဲ့ကွပါတယျ။ ကတုတျကငျြးတဈခုရဲ့နာမညျက Kulhpi ဖွဈပွီး Taitan ရှာနဲ့ အနီးဆုံးမှာ ရှိပါတယျ။ Kulhpi နဲ့ (၁၈ဝ) ပလေောကျအကှာမှာ (၆) ပကေနေ (၉) ပကေယျြတဲ့ ကတုတျကငျြးကို ဆောကျလုပျကွတယျ။ အဲဒီကတုတျကငျြးနှဈခုဟာ Kulh Baan ချေါ (၃) ပအေနကျနဲ့အကယျြ လမျးကွောငျးတခုနဲ့ ဆကျသှယျ ဖောကျလုပျထားပါတယျ။ Kulhpi နှငျ့ Kulh Baan တှကေို သဈသားတှသေဈရှကျတှနေဲ့ ဖုံးထားပါတယျ။ ခံတပျတှအေနားမှာလညျး (၃) ပအေမွငျ့ရှိတဲ့ ဆူးခြှနျတှေ စိုကျထူထားပါတယျ။ နောကျ အမြိုးသမီးနဲ့ကလေးတှေ ပုနျးဖို့နရော၊ သူကွီးတှေ ပုနျးဖို့နရောနဲ့ နတျဆရာတှေ ပုနျးဖို့နရောတှကေိုလညျး ဆောကျလုပျထားပါတယျ။ ရနျသူတှရေဲ့လှုပျရှားမှုကို စောငျ့ကွညျ့ဖို့ ကငျးစောငျ့မြှျောစငျကိုလညျး Mualsan တောငျမှာ ဆောကျလုပျထားကွပါတယျ။
ဗွိတိသြှစဈဗိုလျခြုပျကွီး Faunce က Taitan ကို တိုကျဖို့အတှကျ 42nd Gurkha Light Infantry Division
ကနေ ရိုငျဖယျကိုငျစဈသား (၆၅) ယောကျနဲ့ 2nd Norfolk Battalion ကနေ ရိုငျဖယျကိုငျ စဈသား အယောကျ (၆ဝ) စလှေတျခဲ့ပါတယျ။ ထိုစဈကွောငျးကို 2nd Norfolk Battalion က Maj. Shepherd နဲ့ 42nd Gurkha တပျကို Captain Westmoreland တို့က ဦးဆောငျပါတယျ။ ဗွိတိသြှစဈတပျဟာ ၁၈၈၉ ခုနှဈ၊ မလေ (၄) ရကျနမှေ့ာ ဖို့ဝှိုကျကနေ Buanman, Mualsan, Ngumpi, Nalun, Taikhe အရပျတှကေို ဖွတျကြျောပွီး Taitan ဘကျကိုဦးတညျလာခဲ့ကွပါတယျ။ ဗွိတိသြှတို့ ခြီတကျလာတာကို ပထမဆုံးသိတာကတော့ စီးယငျးတို့မှေးထားတဲ့ ခှေးဟောငျသံတှကေနေ သတိထားမိကွပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ Mualsan ကနေ ကငျးစောငျ့နတေဲ့ Pu Zong On က ဗွိတိသြှတို့ ခြီတကျလာတာတှတေ့ာနဲ့ ရှာကိုပွေးပွီးပွောပါတယျ။ အဲဒီနောကျ ကလေးသူငယျ (၈ဝ)၊ အမြိုးသမီးတှေ၊ ရှာသူကွီးတှဟော ပုနျးအောငျးရမယျ့ နရောတှဆေီကို သှားကွပါတယျ။ စီးယငျးစဈသားတှကေလညျး ကတုတျကငျြးတှမှော နရောယူကွပါတယျ။ ဗွိတိသြှတို့ Taitan ရောကျတဲ့အခြိနျမှာ တရှာလုံး တိတျဆိတျနပေါတယျ။ Taitan ကနေ Siallum ဘကျကို ဆကျလကျ ထှကျခှာလာခဲ့ကွပါတယျ။ စီးယငျးတှကေလညျး ခငျြးတူမီးသနေတျနဲ့ အသငျ့စောငျ့ကွိုခဲ့ကွပါတယျ။
ဗွိတိသြှစဈတပျတှဟော ကတုတျကငျြးနဲ့ ပေ (၁၅ဝ) လောကျအကှာကို ရောကျတာနဲ့ စီးယငျးတှကေ ကတုတျကငျြးတှထေဲကနေ ဒရစပျ ပဈခတျကွပါတယျ။ ဗွိတိသြှတို့ဟာ ဘယျကနေ ပဈတယျဆိုတာ ခကျြခွငျးမသိတဲ့အတှကျ တုနျလှုပျမှငျသကျသှားကွပါတယျ။ Second. Lt. Michell ကလညျး ကညျြသငျ့ပွီး ပဈလဲပါတယျ။ ဗွိတိသြှတို့ကလညျး သနေတျငှထှေ့ကျနတေဲ့ ကတုတျကငျြး (၁) ကို ပွနျပဈကွပါတယျ။ ဆေးဆရာဝနျ ဗိုလျကွီး Le Quesne လညျး Lt.Michell ရဲ့ဒဏျရာကို ကွညျ့ပေးရငျး စီးယငျးတှဘေကျကို ပွနျပွနျပဈပါတယျ။ အဲဒီလို အပွနျအလှနျပဈခတျရငျး မကွာခငျမှာ ဗွိတိသြှစဈသားတှဟော ကတုတျကငျြး (၁) အပျေါကို ရောကျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ကတုတျကငျြးအဖုံးကိုဖှငျ့ပွီး အထဲက စီးယငျးစဈသားတှကေို ပဈခတျတာကွောငျ့ စီးယငျးစဈသားတှေ ကဆြုံးခဲ့ကွပါတယျ။
အဲဒီအခြိနျမှာ ကတုတျကငျြး (၂) က စီးယငျးစဈသားတှဟော ဗွိတိသြှတို့ ရှဆေ့ကျမတိုးနိုငျဖို့နဲ့ မလှုပျနိုငျအောငျ ပဈခတျနခေဲ့ပါတယျ။ ကတုတျကငျြး (၂) ဘေးက ခွုံထဲကနလေညျး စီးယငျးတှကေ ပဈခတျနတောကွောငျ့ ဗွိတိသြှတို့ ဆုတျခှာခဲ့ကွရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ စီးယငျးတို့က လိုကျလံမပဈခတျခဲ့ကွပါဘူး။ ဗွိတိသြှတို့ဟာ ဆုတျခှာရငျး Taitan ရှာကို မီးရှို့ခဲ့ကွပါတယျ။ ဗွိတိသြှဘကျက အရာရှိတယောကျနဲ့ စဈသားသုံးယောကျ ကခြဲ့ပွီး ဗိုလျကွီး Mayne၊ ဗိုလျကွီး LeQuesne နဲ့ စဈသား (၈) ယောကျ အပွငျးအထနျ ဒဏျရာရရှိခဲ့ကွပါတယျ။
အဲဒီလို ဆုတျခှာရတဲ့အကွောငျး ဗိုလျခြုပျကွီး Faunce က စဈကျောမရှငျနာခြုပျဆီကို အခုလို အစီရငျခံခဲ့ပါတယျ။ “42nd Gurkha တပျကနေ စဈသား (၆၅) ယောကျနဲ့၊ Norfolk ကနေ (၆ဝ) ကို ဗိုလျမှူး Shepherd ကို ဦးဆောငျခဲ့ပွီး Taitanကို သှားတိုကျရနျအမိနျ့ပေးခဲ့ပါတယျ။ သူတို့အသဈတညျတဲ့ရှာ ရောကျတဲ့အထိ ဘာမှ ပွသနာမဖွဈခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီရှာအောကျမှာတော့ ကတုတျကငျြးကောငျးကောငျး (၂) ခု ရှိပါတယျ။ အဲဒီ ကတုတျကငျြးတှကေ တခုနဲ့တခု ဆကျသှယျနိုငျပွီး၊ သဈသားတှသေဈရှကျတှနေဲ့ ဖုံးထားပါတယျ။ စီးယငျးခငျြးစဈသားတှဟော ကတုတျကငျြးနဲ့ ကိုကျ (၅ဝ) အကှာလောကျ ကနြျောတို့ရောကျတဲ့အခြိနျမှာ စပဈပါတယျ။ သူတို့ကတုတျကငျြးထဲကနေ လုံးဝနောကျမဆုတျပဲ ပဈခတျကွပါတယျ။ ကတုတျကငျြး (၁) မှာ Bayonet (ရိုငျဖယျလျသနေတျရှတှေ့ငျ တပျဆငျထားသောဓါးငယျ) နဲ့ (၈) ယောကျကို ကနြျောတို့သတျနိုငျခဲ့တယျ။ ကတုတျကငျြးတဈကနေ သူတို့လူ (၃ဝ) လောကျကို သတျနိုငျခဲ့ပွီး အမြားအပွား ဒဏျရာရရှိခဲ့ကွပါတယျ။ ကနြျောတို့ဘကျက သဆေုံးသူတှေ ဒဏျရာရသူတှအေတှကျ ကနြျော အရမျးဝမျးနညျးပါတယျ။ ရှာသဈဆောကျတာကို ဖကျြဆီးနိုငျခဲ့ကွပမေယျ့ ကတုတျကငျြးကိုတော့ အဲဒီနမှေ့ာ မသိမျးနိုငျခဲ့ပါဘူး။ တိုကျပှဲခေါငျးဆောငျက ကဆြုံးသူ၊ ဒဏျရာရသူတှေ မြားနပွေီဖွဈတဲ့အတှကျ ထပျခံရမယျဆိုရငျ အဲဒီည ဖို့ဝှိုကျကို ပွနျမရောကျနိုငျတော့ဘူး။ နောကျပွီး ညနစေောငျးပွီဖွဈတဲ့အတှကျ ညအိပျဖို့နဲ့၊ အစားအစာလညျး မပါလာတဲ့အတှကျ ပွနျဆုတျခဲ့ပါတယျ”… ဆိုပွီး မလေ (၁၅) ရကျမှာ အစီရငျခံစာ ရေးခဲ့ပါတယျ။
ဗွိတိသြှတို့ ဆုတျခှာပွီးနောကျ စီးယငျးခငျြးတှဟောလညျး ကတုတျကငျြး (၂) နဲ့ (၃) ကို ပွငျဆငျပွီး ဗွိတိသြှတို့ကို အသငျ့ စောငျ့နကွေပါတယျ။ ဗွိတိသြှဗိုလျခြုပျကွီး Faunce ကို မလေ (၆) ရကျမှာ ဗိုလျခြုပျကွီး Symonds နဲ့ အစားထိုးပွီးနောကျ သူကိုယျတိုငျ စဈသား (၁၅ဝ) နဲ့ မလေ (၁ဝ) ရကျနမှေ့ာ Siallum ကိုခြီတကျတိုကျခိုကျခဲ့ပါတယျ။ မလေ (၄) ရကျနတေို့ကျပှဲရဲ့ကတုတျကငျြးတှကေို သှားကွညျ့ရာမှာ စီးယငျးစဈသားအလောငျးတှကေိုလညျး တှခေဲ့ပါတယျ။ ကတုတျကငျြးတှကေိုတော့ မီးရှို့ဖကျြဆီးခဲ့ပါတယျ။ မေ (၄) ရကျတိုကျပှဲမှာ စီးယငျးစဈသား (၂၇) ဦး ကဆြုံးခဲ့ကွပါတယျ။ ရှာလျလုမျးတိုကျပှဲတှငျ ကဆြုံးသှားသော စီးယငျးခငျြးစဈသညျ (၂၇) ဦးတို့၏အမညျမြားမှာ –
1. Pu Khup Vum, 2. Pi Vung Neam, 3. Pi Ot Huai, 4. Pu Khai Suak, 5. Pu Lian Kam, 6. Pu Vum Mang, 7.Pu Tuang Vungh, 8. Pi Huai Nuam, 9. Pu Pau Suang, 10. Pi Lian Vung, 11. Pu Zong On, 12. Pu Pau Suang, 13. Pi Lian Vung, 14. Pu Zong On, 15. Pu Zong Thuam, 16. Pu Za Vum, 17. Pi Lam Ciang, 18. Pu Thang Hau, 19. Pi Uap Nuam, 20. Pu Lu Kam, 21. Pi Niang Ciang, 22. Pu Son Suang, 23. Pu En Kham, 24. Pi Dim Ngiak, 25. Pu Pau Lam, 26. Hang Sing နှငျ့ 27. Pi Uap Huai တို့ဖွဈကွသညျ။
Buanman သူကွီး Lian Kham၊ Tartan သူကွီး Do Lian ရဲ့ ညီနှဈယောကျလညျး ကဆြုံးခဲ့ကွပါတယျ။ Taitan သူကွီး Do Lian လညျး မွငျးခွံထောငျမှာ ထောငျ (၅) နှဈကခြဲ့ပါတယျ။
ဒီတိုကျပှဲမှာ ပွငျးပွငျးထနျထနျ ဒဏျရာရရှိခဲ့တဲ့ Capt. Le Quesne ကို သူ့ရဲ့ရဲရငျ့မှုနဲ့ စဈရေးကြှမျးကငျြမှုကွောငျ့ စဈဘကျဆိုငျရာ အမွငျ့ဆုံးဂုဏျပွုမှုဖွဈတဲ့ Victoria Cross ဆုကို ခြီးမွှငျ့ခဲ့ကွပါတယျ။ အဲဒီတံဆိပျကို ဒီနထေ့ကျတိုငျ ဗွိတိသြှနိုငျငံ Jersey ပွတိုကျမှာ တှမွေ့ငျနိုငျပါတယျ။
Capt. LeQuesne ရဲ့ Victoria Cross ဆုရတာကို ကွညျ့ခွငျးအားဖွငျ့ ရှားလျလုမျးတိုကျပှဲပွငျးထနျပုံကို သိနိုငျပါတယျ။ ကမ်ဘာကွီးကို အုပျစိုးခဲ့တဲ့ ကမ်ဘာ့အငျအားအကွီးဆုံးစဈတပျက ကနြျောတို့ဘိုးဘှားတှကေို လှယျလငျ့တကူ မနိုငျနိုငျခဲ့ပါဘူး။ ကနြျောတို့ခငျြးပွညျကွီးကို လာရောကျတိုကျခိုကျသူတှေ ဘယျလိုပငျ အငျအားကွီးလငျ့ကစား ရဲဝံ့စှာနဲ့ ပွနျလညျတိုကျခိုကျနိုငျတဲ့ ကနြျောတို့ဘိုးဘှားတှရေဲ့ ရဲစှမျးသတ်တိကို ဂုဏျပွုရမှာဖွဈသလို၊ အစဉျ လေးစားဂုဏျယူရမှာလညျး ဖွဈပါတယျ။
ရှားလျလုမျးတိုကျခိုကျမှုမှာပါဝငျခဲ့တဲ့ Pu Pau Thual ကလညျး ရှာလျလုမျးတိုကျပှဲနှငျ့ တိုကျပှဲတှငျကဆြုံးသှားသော စဈသူရဲကောငျးမြားအား ဂုဏျပွုရငျး အောကျပါ ရှေးရိုးစဉျလာသီခငျြးတဈပုဒျ စပျဆိုခဲ့သညျ။
(ကဆြုံးသှားတဲ့ သူရဲကောငျးအမြိုးတှရေဲ့ နာမညျကို ခှနျအားယူရရှေတျရငျး ငါ… ရနျသူတှကေို ခမြှေုနျးခဲ့တယျ)